चार्ल्स द्वितीय, स्वीडेन को राजा द्वारा XVIII सताब्दी मा शुरू जो, को "फूल को भाषा" मा Gloxinia, "पहिलो नजर मा प्रेम।" अर्थ साँच्चै, यो फूल प्रेममा तुरुन्तै तपाईँले उहाँलाई हेर्न रूपमा फस्न सक्छन्। Gloxinia Bells को आकार मा ठूलो खूबसूरती चित्रित फूल छ। त्यहाँ धेरै अधिक बीस भन्दा हुन सक्छ। कहिलेकाहीं तिनीहरूले एकै समयमा ब्लूम। पत्रदल टेरी वा चिल्लो, तरंग र सामान्य हुन सक्छ, रंग मा भिन्न - यो cultivar मा निर्भर गर्दछ।
पाप संकर - यो houseplant दोस्रो नाम छ। यो ब्राजील आउँछ। अझै gloxinia - अवैतनिक माली बीच एक साधारण नाम। यसको बोट शायद किनकी फूल आकारको घण्टीको, प्राप्त गरेको छ, र यो जर्मन बाट अनुवाद गरिएको छ शब्द "Glocke"।
Gloxinia: हेरविचार र प्रजनन
उज्ज्वल परिवेश प्रकाश - पूर्ण फूल gloxinia लागि राम्रो प्रकाश आवश्यक छ। तपाईं सूर्य मा राख्न सक्नुहुन्छ, यो बल्न र पात र फूल को तीव्र withering संग fraught छ। Gloxinia उच्च आर्द्रता रुचि। तर, उनको pubescent छोड्छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, स्प्रे संयंत्र हुँदैन। यसलाई विस्तार माटो, फोहराहरू उपकरण संग Pallets प्रयोग गर्न आवश्यक छ, humidifiers स्थापना गर्नुहोस्। कोठा प्रसारित गर्न बढी सम्भावना हुनुपर्छ।
पनि, ठीक gloxinia पानी हाले गर्न आवश्यक छ। यो tubers waterlogging संवेदनशील। को tuber फरवरी-मार्च मा जगाए गर्दा gloxinia bloomed जब यो जोडतोडले छ जसमा बाँकी अवधिका, पछि, यो बिस्तारै हालिएको छ। समयमा फूल बिरूवा बारम्बार, तर सावधान हजारी आवश्यक छ। पानी एक पट मा पृथ्वीको सम्पूर्ण सतह माथि वितरण गर्नुपर्छ, र राम्रो चटाई मार्फत बोट पानी।
Gloxinia माटो स्थिर Fortification आवश्यक छ। एक हप्ता प्रत्यारोपण पछि ताजा माटो मा बिरुवाहरु साप्ताहिक सुरु गर्नुपर्छ : fertilizing मल फस्फोरस - फूल तन्तु र फूल को गठन को समयमा, नाइट्रोजन - पहिलो। उपयोगी र जैविक fertilizing हुनेछ।
प्रचारित gloxinia विभिन्न तरिका: पात cuttings, को tuber को विभाजन, बीउ, स्प्राउट्स, पानामा को भाग। सबै भन्दा साधारण तरिका - पात cuttings। राम्रो कागज चयन र पानी कम। उहाँले जरा, एउटा सानो पट मा माटो मा लगाए पात गरौं जब। वयस्क बोट लागि रूपमा, उहाँलाई हेरचाह गर्न।
Gloxinia bloomed: के?
सामान्यतया gloxinia यसको विकास को प्रारम्भिक चरणमा केही फूल "फेंकता"। यसको पहिलो फूल कम पात मात्र 1-2 जोडी छोडेर स्टेम कटौती गरेपछि यो सिफारिस गरिएको छ। जो बढ्न stepchildren छोड्दा चाँडै संलग्न को स्थान मा बाहिर आउन र नयाँ फूल उत्पादन हुनेछ। यो समयमा, संयंत्र नाइट्रोजन मल संग खाद गर्नुपर्छ र त्यहाँ तन्तु हुनेछ गर्दा फस्फोरस जानुहोस्।
दोस्रो फूल गिरावट नजिक पुग्छन्। यो समय, बिस्तारै gloxinia टीन कम, शीर्ष लाउने मल कम। अनुहार मा सीधा बोट को पात पहेंलो बारी र सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो गर्न थाल्छन्। त्यसैले, gloxinia bloomed: के?
एक बिरूवा टीन पूरै ceases। स्टेम कटौती गरिएको छ। तपाईं उचाइ दुई सेन्टिमिटर बारेमा रुखको ठूटो छोड्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पूर्ण सुक्खा छ, यो unscrewed र वेवास्ता हुनुपर्छ। देशमा gloxinia tubers छ जसमा पट, पैन कवर र एक सुन्दर गाढा ठाउँमा यसलाई हटाउन गर्नुपर्छ। तर यो एउटा लामो समय को लागि फूल भूल पर्छ भनेर होइन। हो, हामी उहाँलाई gloxinia bloomed जब आराम गर्न पठाइयो। के अर्को के गर्ने? एक पटक एक महिना आवश्यक छ र tubers संग बर्तन जाँच गर्न भनेर नबिर्सनुहोस्। सुक्खा माटो बिस्तारै पानी moistened गर्नुपर्छ। यदि नयाँ मार पनि प्रारम्भिक बाहिर आउन, तिनीहरूले बिग्रनु पर्छ, तर तपाईं tuber वयस्क, बलियो र वसन्त पुन: जारी गर्न स्प्राउट्स गर्न सक्ने पक्का छन् भने मात्र।
छैन पनि अवकाश मा दुई वर्ष छ जो युवा बिरुवाहरु, शायद यो जाडो आउटसोर्स किनभने आफ्नो सानो र tubers को पठाउन गर्नुपर्छ। तिनीहरू सबै जाडो को उज्यालो तखता मा बढ्न जारी कि राम्रो।
वसन्त मा, त्यहाँ मार हुनेछ गर्दा बिरुवाहरु को tubers बिस्तारै हल्लाउनु भएको बर्तन बाहिर पुरानो जमीन को साफ, र त्यसपछि नयाँ माटो मा राखे। यसलाई चाँडै भयो र फूल लागि बल प्राप्त भनेर बोट, एक उज्ज्वल स्थान मा राख्नु भएको छ।
खैर, बाँकी gloxinia को अवधि सबै जाडो पछिल्लो गर्न छैन। संयंत्र पर्याप्त हुन सक्छ, र नयाँ सेना जम्मा र फेरि दुई तीन हप्ता वृद्धि मा सुरु भयो। भनेर हामी उहाँलाई राम्रो हेरविचार प्रदान गर्न आवश्यक छ हो।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, त्यहाँ bloomed कि gloxinia गलत केही छ। के अर्को गर्न - तपाईं यी सुझावहरू शीघ्र।
एक प्रकार को बेल Zhakmana: प्रजातिहरू को वर्णन, विशेष बढ्दै
रातो फूल संग फूल - जाँगरको एक प्रतीक
रूसी सेना बारेमा चलचित्रहरू। सेना बारेमा वृत्तचित्र र सुविधा फिलिमहरु
यसको मूल "ले रुखको ठूटो मार्फत डेक" अर्थ phraseologism
लाल सेना को थिएटर। रूसी सेना थियेटर
ब घर: कसरी धेरै प्रयास राख्दै छैन, यो निर्माण गर्न?
स्मार्टफोन "सोनी C4": समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों, मूल्यहरू
बिजुली प्रकाश को विकास को एक संक्षिप्त इतिहास
बच्चा छाती deformity छ: विकृति र उपचार विधि को कारण
कटि प्वाल पार्ने काम: सङ्केत गर्छ र प्रक्रिया को विवरण
हनी कवक - मीठो औषधि
Georgia को जनसंख्या: वर्तमान अवस्था